१५ बुँदामा पढ्नुस् प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । नेकपा सचिवालयको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको अध्यक्ष ओली समर्थकहरुले आलोचना गरेका छन् । ओली निकट स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य थापाले उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिए बैठक नै नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
यसै सम्बन्धमा शनिबार मात्रै ओली निकट समूहको भेला भएको छ । उता राष्ट्रपतिले समेत नेकपाका केही नेताहरुसँग छलफल गरेकी छिन् ।
के छ त प्रचण्डको प्रतिवेदनमा ? किन तरंगित भए ओली र उनी निकटहरु ?
पढ्नुस प्रतिवदेनका १५ मुख्य बुँदाहरु
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुन सरकारले देशमा बन्द र बन्देजको घोषणा गरेको स्थितिमा श्रमजीवी, गरिब र कमजोर वर्ग तथा समुदायका मानिसहरूको पीडाप्रति प्रधानमन्त्री संवेदनशील हुनुभएन। ती समुदायका पीरमर्काको कुरा गर्नेप्रति व्यङ्ग्य गर्दै आलोचना गरियो
‘अति गर्नु, अतिचार नगर्नू’ भन्छन् यो देख्दा त मलाई पनि भन्न मन लागेको छ, “इनफ इज इनफ।”
याे पनि पढ्नुस नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै, यस्ता छन् छलफलका एजेण्डा
ट्याग्स: नेकपा विवाद, प्रचण्डकाे राजनीतिक प्रतिवेदन, सचिवालय बैठक